1. လူအတော်များများသည် Windows ကွန်ပျူတာများကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ Mac သည်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲကြောင်း၊ သော့များသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမသိ၊ အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ Mac သည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတွင်သင်ထင်သည်ထက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလုံခြုံရေးစနစ်ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Mac OS ဖန်သားပြင်ကိုမည်သို့ယူရမည်နည်းနှင့်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
2. Shift + Command +3ခလုတ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖမ်းယူခြင်း။
3. တစ်လျှပ်တစ်ပြက်၏အသံကိုကြားရတဲ့အခါ ဖမ်းယူထားသောဖန်သားပြင်ကို Desktop တွင်သိမ်းဆည်းပြီးလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
4. Shift + Command +4ခလုတ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုလက်ဖြင့်ဖမ်းယူခြင်း။
5. mouse + cursor ပတ်ပတ်လည်တွင် "+" သင်္ကေတကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘယ်ဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်ရိုက်လိုသည့်acrossရိယာကိုဆွဲချပါ။ ထိုအခါမောက်လွှတ်ပါ။ သင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ဓါတ်ပုံများကို Desktop ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
7. Shift + Command +5ခလုတ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်သားပြင်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
8. ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း system ကရွေးချယ်ဖို့ capture menu ကိုပြလိမ့်မယ်။
9. မီနူးတစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ဘယ်မှညာသို့: ●မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖမ်းယူခြင်း●တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုးကိုသာဖမ်းယူခြင်း။ ●လက်ဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုဖမ်းယူခြင်း●မျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လက်စွဲ●ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်ရွေးစရာများ●ဖမ်းယူခြင်းခလုတ် - ဖမ်းယူခြင်း (သို့) မှတ်တမ်းတင်ခြင်း - ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းစတင်ပါ။ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်သောအခါ၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ“ ◻” သင်္ကေတကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အချိန်မရွေးမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ Stop ကိုနှိပ်ပါကသင်၏ဗီဒီယိုသည် Desktop တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
10. သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူနေစဉ်အရာရာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအချက်အချို့ရှိပါသည်။ image file ၏ preview သေးသေးလေးကိုညာဘက်အောက်ထောင့်မှာပြလိမ့်မည်။ အလုပ်ကိုချက်ချင်းပြန်လည်စတင်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်၎င်းကို LINE ပရိုဂရမ် (သို့) ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများသို့ဆွဲချ။ ဆွဲချပြီး၎င်းကို နှိပ်၍ ကိုင်ထားနိုင်သည်။
11. အပေါ်ကဥပမာက Apple လို Mac OS developer တွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်မှာအသေးစိတ်ကိုဂရုစိုက်ကြတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းပင်။ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုချုံ့ခြင်းအတွက်အချိန်များစွာသိမ်းဆည်းသည်။ ချက်ချင်းပို့ပြီးသောသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောဖိုင်များကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်အတွက် Mac OS ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအချက်များလည်းရှိသည်။ နောက်လာမည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိမည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလိုက်ရန်နှိပ်ပါ။